UmbhaloMagic: IQonga lokuThumela amaNqaku ngokuShicilela iiNcwadi (SMS) | Martech Zone
NgoMvulo, Agasti 17, 2020 NgoMvulo, Agasti 17, 2020 Douglas Karr
Nokuba kungokuqinisekiswa kwezinto ezimbini okanye ukwenza ukubekelwa isidlo sangokuhlwa, ndiyaqala ukuqaphela ukuba ndikhululeke ngakumbi xa ndisebenzisa imiyalezo ebhaliweyo (SMS) kunokuba ndandinjalo kwiminyaka embalwa edlulileyo. Andiqondi ukuba ndim ndedwa… abathengi kunye namashishini ngokufanayo bonwabile ukuthumela nokufumana imiyalezo ngaphandle kokuphazanyiswa ziifowuni.
Eyona nto iphambili, nangona kunjalo, yindlela yokulawula lonke unxibelelwano kwinqanaba leshishini. Kulapho amaqonga athumela imiyalezo eza kusebenza khona. Ngamaqonga anje UmbhaloMagic, Ishishini lingathumela izaziso, izilumkiso, izikhumbuzo, iziqinisekiso, kunye nemikhankaso yokuthengisa ngeSMS ngaphandle konxibelelwano olulodwa.
Iinkcukacha-manani kuMyalezo obhaliweyo
I-15.2 yezigidi zemiyalezo ethunyelwa ngomzuzu ngamnye kwihlabathi liphela
I-95% yemiyalezo ebhaliweyo ifundwe kwisithuba semizuzu emi-3 ithunyelwe
Abantu abazizigidi ezi-4.2 bathumela imiyalezo ebhaliweyo kwihlabathi liphela
Imizuzwana engama-90 lixesha lokuphendula eliphakathi kwemiyalezo ebhaliweyo
Iipesenti ezingama-75 zabantu zikhetha ukunikezelwa ezithunyelwa ngombhalo
Iimpawu zeSMS ezikhulisa ishishini lakho
Thumela iZibhalo kwi-Intanethi -Thumela isicatshulwa kwi-intanethi kubasebenzi bakho nakubathengi. Ngenisa abafowunelwa kwaye ulawule uluhlu lonke kwiakhawunti yakho ye-TextMagic.
I-imeyile kwiSMS Ukuthumela izicatshulwa kwi-imeyile kulula. I-TextMagic iguqula i-imeyile yakho ibe ngumyalezo obhaliweyo kwaye uyihambise, nazo zonke iimpendulo emva koko zifike njengee-imeyile.
ISMS Gateway API - Dibanisa isango leSmsMagic leSMS kwiwebhusayithi yakho okanye isoftware usebenzisa izixhobo ze-SMS ze-SMS kwaye wongeze imiyalezo ekuthumeleni kwakho ishishini.
Isoftware yeSMS yePC kunye neMac -I-TextMagic Messenger yinkqubo yedesktop ekuvumela ukuba uthumele imiyalezo ekujoliswe kuyo kubaphulaphuli bakho, nokuba ibe nye ngexesha okanye ngobuninzi.
Iindlela ezimbini zeNgcaciso yeSMS -Thumela kwaye ufumane imiyalezo ebhaliweyo kwangoko ngencoko ye-TextMagic kwi-intanethi yengxoxo yeSMS. Ifanelekile kunxibelelwano olukude nabasebenzi kunye nabathengi.
Uluhlu lweSMS -I-imeyile ethunyelwe kwidilesi yoluhlu lokuhambisa ithunyelwa kwangoko njengomyalezo obhaliweyo kuwo onke amanani eselfowuni agcinwe kuluhlu.
Fumana iSMS kwi-Intanethi Sebenzisa iinombolo zeSMSM ezinikezelweyo okanye ezabelwana ngazo ukufumana iSMS engenayo kunye neempendulo kwimiyalezo yakho evela kubathengi nakubasebenzi.
Umyalezo weSMS weHlabathi -Fikelela kubathengi bakho nakubasebenzi kwihlabathi liphela ngokufikelela kwiinethiwekhi ezingaphezulu kwe-1,000 kumazwe angama-200 +.
Usetyenziso lwe-iOS kunye ne-Android -Khawuleza uthumele kwaye ufumane imiyalezo ye-SMS, yenza uluhlu kunye nabafowunelwa, lawula amaphulo akho kubhabho usebenzisa ifowuni yakho ephathekayo.
Ukudityaniswa kweSMS kweZapier -Sebenzisa iZapier ukuqhagamshela i-TextMagic kunye neeapps zakho ozithandayo. Yinto elula yokuzenzekelayo enceda ishishini lakho.
Ukungena kwelinye kwaMashishini -Ukungena kwi-TextMagic usebenzisa iziqinisekiso zakho zokubonelela ngesazisi kwaye unike ngokulula ukufikelela kumalungu eqela lakho.
Isisombululo seSMS seshishini Izisombululo zeshishini zibandakanya iilog zophicotho, ukufikelela kwindima, kunye ne-SSO zezinye zeempawu ezikunceda ukuba ukhule.
Uphando lweSMS lokuqokelela ingxelo -Uphucula amava abathengi kwaye ufumane ingxelo ebalulekileyo ngeenkonzo zakho kwangoko nakubaphi na abaphulaphuli.
Ukuqinisekiswa kweZinto ezimbini (2FA) iSMS -Gunyazisa abasebenzisi ngemiyalezo ebhaliweyo, khusela intengiselwano ekwinqanaba elisezantsi, kwaye ungeze ukhuseleko olongezelelekileyo kwisoftware yakho.
UkuKhangelwa kweNethiwekhi kunye nokuQinisekiswa kweNombolo -Chonga iinombolo zefowuni ezingasasebenziyo kunye nabaphetheyo kwangoko kwaye ufumane iziphumo ezingcono kunye namaxabiso okuhanjiswa kunye namaphulo akho eSMS.
UkuKhangela nge-imeyile kunye nokuQinisekiswa -Jonga imeko, ukuhanjiswa, kunye nenqanaba lomngcipheko kwiidilesi ze-imeyile ngenkonzo yokuqinisekiswa kwe-imeyile kunye ne-API.
Ukuqala nge-TextMagic ilula
Ungaqala ngamanyathelo amathathu alula. Yenza iakhawunti SIMAHLA, ulayishe ityala ohlawulelwa ngalo kwaye uqalise ukuthumela nokufumana izicatshulwa.
Yenza iAkhawunti yasimahla - Bhalisela iakhawunti yakho yasimahla ukuze uzibonele ukuba kulula kangakanani. Zama onke amanqaku kwaye usebenzise ikhredithi yasimahla ukuthumela kunye nokufumana imiyalezo phantse naphi na emhlabeni.
Layisha ityala elihlawulelwa kwangaphambili -Uxa ukulungele ukuthumela umyalezo wakho wokuqala ngobuninzi, sebenzisa intlawulo elula ohlawula ngayo ukuhlawula njengoko usiya (akukho zivumelwano, iindleko ezifihliweyo okanye iifizi eziqhubekayo).
Thumela kwaye ufumane iSMS -Thumela kwaye ufumane i-SMS nanini na xa ufuna ukwenza kunye ne-interface elula yokuzixhasa. Yinto elula njengokuthumela i-imeyile okanye iSMS kwifowuni yakho.
Bhalisela iAkhawunti yasimahla yokuLinga iMagic
Ukubhengezwa: Siyi-a UmbhaloMagic Ukudibana.
tags: imeyile kwi-smsi-SMSsms aphaiqonga lesmsumyalezo wegamaimiyalezo ebhaliweyo apiiqonga lemiyalezo ebhaliweyoisicatshulwa sombhalo